Maxaa Looga dooday maalintii 1-aad ee Wada-hadalka ONLF iyo Itobiya? maxaa se kadhashay? | ogaden24
Maxaa Looga dooday maalintii 1-aad ee Wada-hadalka ONLF iyo Itobiya? maxaa se kadhashay?
Wada Xaajoodka masiiriga ah ee magalada Nairobi saaka uga Furmay mamulka Woyanaha iyo Jabhada ONLF ayaa ku bilaabmay Qodob doodeed xasaasi ah oo Labada dhinac isku mari waayeen.
Qodobka 1-aad ee Ajandaha shirka oo ahaa Aaya Katashiga shacabiga Ogadenia ee mudada dheer kusoo Jiray Halganka Gobanima-doonka ah, ayay Ergadii kasocotay mamulka Woyanuhu iskudayeen in dib loo dhigo kadoodistiisa, balse waxaa Qodobkaasi kudhagay Ergada ONLF oo dhankooda kudooday inay Waajib tahay in marka Hore Qodobkaasi laysla meel dhigo.
Ergada Labada dhinac oo u muuqday in dhinac waliba mowqifkooda ku adag-yihiin ayaa kaliftay in shirku aanu wax Horusocod ah samayn maanta, balse Gudiga kasocda dawlada Kenya oo leh doorka dhex-dhexaadinta Labada dhinac iyo Fududaynta Qodobada laga doodayo, ayaa dhankooda dadaal xoogan Galiyay sidii shirku Horay ugu socon lahaa.
Dadaalka Gudiga dhex-dhexaadinta oo Kaashanaya Khubaro kasocota safaaradaha dalalka ree Galbeedka ayaa ugu dambays Horseeday in Kooxda kasocotay dhinaca Woyanaha ay Aqbalaan in Qodobkaasi si rasmi ah looga dooda, waxayna Labada dhinac si dhamaystiran isula Qaateen in subaxnimada Isniinta Bari ah Qodobkaasi uu noqdo Ajandaha Guud ee shirka.
Ergada kasocota Labada dhinac ayuu Qodobkani mid kaste muhiimad wayn u leeyahay waxaana adag in Qodobka Aayo-katashiga ay Labada Garab si sahlan uga Gudbaan, maadaama uu Laf-dhabar u Yahay xiisada siyaasiga ah ee mudada dheer kasoo dhaxaysay shacabka Ogadenia iyo Gumaysiga madow ee Itobiya.
Waxaa Jira bisayl siyaasadeed oo Labada dhinac ah sida uu Ogaden24 u xaqiijiyay masuul kamida Hawl Wadeenada shirka, waxaana uu muujiyay Rajo badan oo ah in shirkani ugu Yaraan Horseedi doono Guul siyaasadeed oo Horseed u noqonaysa in Afti dadwayne laga Qaado shacabka Ogadenia, si ay masuul uga noqdaan masiirka dambe ee Aayahooda.
Shirkani oo u muuqda mid kaduwan shirarka iyo wada Hadaladii Labada dhinac Horay u Yeelan Jireen xogaha kusaabsan iyo Kolba meesha uu marayo, waxaad Kala socon doontaa Hadii Rabi Idmo Ogaden24.